ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: August 2007
မြန်မာ ဘလော့ဂါများ ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ Why do we blog ဆိုတဲ့ Open Seminar ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို လာမည့် 01.09.2007 စနေနေ့ ၁၁နာရီကနေ ၄နာရီအထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဘလော့ဂ် ရေးသားနေကြတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် ဘလော့ဂါတွေကိုယ်တိုင် ဟောပြောကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို သိစေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မီဒီယာ ကန့်သတ်ချက် တော်တော်များများကို ရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့ ဘလော့ဂ် ယဉ်ကျေးမှု အကြောင်းနဲ့ အသုံးပြုရ ဘယ်လောက် လွယ်ကူတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို မျှဝေချင်လို့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လူတိုင်း စိတ်ဝင်တစား အသုံးပြုနေကြတဲ့ နည်းပညာနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို မြန်မာလူငယ် လူကြီးအားလုံး သိစေချင်တာရယ်၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိလာစေရန် စတဲ့ အချက်တွေကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီပွဲတစ်ခု လုပ်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ အကုန်အကျ အများကြီး ရှိသလို အလွန်ပင်ပန်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံ အကျိုးအမြတ် တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မရဘဲ အထက်က ရည်ရွယ်ချက်တွေ သက်သက်အတွက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖြစ်ကြတာပါ။ Company တော်တော်များများကလည်း ဒီပွဲအတွက် ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ အသက်ကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။ အားလုံးကို တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ တက်ရောက် လာသူတွေအတွက် အစားအသောက်နဲ့ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွေလည်း ထည့်သွင်းထားပါကြောင်း။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, August 30, 20072comments:
ကိုရန်အောင်ကြီးက အကြိုက်ဆုံးပို့စ်ငါးခုကိုရွေးပေးပါလို့လာ Tag တယ်။ သူ့ဘလော့ဂ်မှာသွားပြီး ငါးခုတည်းလား ကိုရန်အောင်ရယ် ... လို့တောင်သွားနောက်လိုက်သေးတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ... ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ပို့စ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့
ပြောလို့ရပါတယ် ...။ ကောင်းလွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စာတွေဟာ စာဖတ်သူတွေကိုဘယ်လိုအဆိပ်အတောက် မျိုးမှမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလို့ ယုံကြည်လို့ပါ ...။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မကြိုက်တဲ့ အချို့စာတွေ ကျွန်တော့်မှာရှိပါတယ် ...။ အဓိကကတော့ ကဗျာတွေပါ ... ကဗျာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျွန်တော်အားနည်းပါတယ် ... ။ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်မိတိုင်း အားမလိုအားမရစိတ်တွေဖြစ်ရပါတယ် ...။ ဒါပေမယ့်လဲ ကြိုးစားရေးဖွဲ့နေရင်း ကဗျာကောင်းလေးတွေတော့ရခဲ့ဖူးပါတယ် ...။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ပို့စ်လေးတွေထဲက ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပို့စ်တွေကို မဖြစ်မနေရွေးပေးပါဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေကိုရွေးချင်ပါတယ်။
အချစ်အကြောင်းရေးထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ရှားရှားပါးပါး ၀တ္ထုတိုလေးပါ ...။
မြင်နေတွေ့နေရတဲ့အရောင်တွေကို အဓိပ္ပါယ်တွေလိုက်ဖွင့်ဆိုကြည့်နေမိရင်းက ဒီဝတ္ထုတိုလေးကိုရခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ၂၇နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပါ ...။
ဖတ်ဖူးတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ထဲက ထူးခြားတဲ့အတွေးလေးကိုယူပြီး A ကနေ Z အထိကို ကဗျာလေးစပ်ကြည့်ခဲ့တာပါ ...။ A ဆိုတာက Art , B ဆိုတာက Blind စသည်ဖြင့် စာတစ်ပိုဒ်ချင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေပါနေအောင်ရေးထားတာပါ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လှမ်းပို့လိုက်တဲ့ slide show လေးထဲက စာကြောင်းလေးတွေကို ဘာသာပြန်ပြီး ကိုယ့်အမြင်လေးတွေပေါင်းထည့်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ပါ ...
ကျွန်တော့်အကြိုက်တွေကိုတော့ရွေးပေးပြီးပါပြီ ... ဒါကိုတော့သူများတွေကိုပြန် မ Tag တော့ပါဘူး ...။
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်လေးကို လာရောက်ဖတ်ရှုကြတဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပဲ ပြန်ပြီးမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် ... ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်အကြိုက်တွေကိုတော့ရွေးပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ... စာဖတ်သူတွေကလည်း စာဖတ်သူအကြိုက် ၅ခုဆီကိုရွေးပေးကြဖို့ပါ ... ဒီပို့စ်လေးရဲ့ကွန့်မန့်အောက်မှာ ရွေးပြီး ခေါင်းစဉ်လေးတွေရေးပေးစေချင်ပါတယ် ... ၉.၉.၂၀၀၇ ကျရင် စာဖတ်သူအကြိုက် ငါးခုကိုမဲခွဲပြီးကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါ့မယ် ...
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, August 29, 20077comments:
တရားမျှတမှုတွေခမ်းခြောက်နေတာကို နှမြောတယ် ..။
အောက်ကို တစ်ချက်လေးတောင်ငုံမကြည့်တဲ့သူတွေကို နှမြောတယ် …။
အညွန့်တလူလူနဲ့ လူတော်တွေ …
လူကောင်းတွေဖြစ်မလာတာကို နှမြောတယ် …။
မြင်ရက်နဲ့ကန်းနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို နှမြောတယ် …။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, August 24, 20077comments:
တရားမျှတမှုအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာတိုက်ကြတယ် ...။
ရင်ခုန်သံတွေကို စိတ်ဓါတ်နဲ့ မာကျောစေကြတယ် ...။
အပ်တိုတစ်ချောင်းမပါတဲ့ ခန္ဓာနဲ့ လမ်းလျှောက်
လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ရဲရင့်စွာထွန်းတောက်ကြတယ် ...။
သူတို့လို ... သူရဲကောင်းတွေကိုရှေ့ထားပြီး
ထမင်း တစ်နပ် နှစ်နပ်အတွက်
ခင်ဗျားတို့ ဘယ်ဘ၀ရောက်သွားသလဲဆိုတာ ...။ ။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, August 23, 20075comments:
အနိဌာရုံတွေပဲ ပြုတ်ပြုတ်ကျတတ်တယ်ဆိုတာ … ။
လမ်းမတွေပေါ် တဘုံးဘုံးလဲကြ …
သက်ပြင်းတွေက ဂီတဖြစ်သွားတယ် …။
မသေချာမှုတစ်ခုနဲ့ လေးလံနေကြတယ် …။
လက်ကျန် စာရိတ္တတွေကို တိုက်စားသွားတယ် …။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, August 20, 20073comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, August 17, 2007 8 comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Tuesday, August 14, 20073comments:
မနေ့က စိတ်ကူးနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံဘလော့ဂ်လေးတစ်ခုကိုစလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်လေးရဲ့ နာမည်က အလင်းနဲ့ရေးတဲ့ပန်းချီ တဲ့။ Gtalk ထဲကနေ ကိုမျက်လုံးကိုလှမ်းမေး၊ ညီညီ့ကို လှမ်းမေးနဲ့ အဲဒီ့ ဘလော့ဂ်လေး တဖြေးဖြေးနဲ့ ရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ပထမတော့ ဘလော့ဂ်လေးရဲ့လင့်ခ်ကို drawingwithlight ဆိုပြီးပေးချင်ပေမယ့် အခြားတစ်ယောက်ကကိုယ့်ထက်လက်ဦးသွားလို့ လက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီ့လိုနဲ့ပဲ ... လင့်ခ်လေးက ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် sketchingwithlight.blogspot.com တဲ့။ ကျွန်တော်မတောက်တခေါက် လျှောက်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကိုပဲ သီးသန့်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, August 09, 2007 No comments:
ဘယ်သူတွေဆွဲထားတဲ့လိုဂိုလဲဆိုတာကို ဒီနေရာမှာ မဖော်ပြထားပါဘူး။ မဲပေးသူတွေအနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေနဲ့ မဲပေးတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ပါ။ အတည်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာ ဘယ်သူဆွဲတာပါဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကြေငြာပေးပ့ါမယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ မိမိအနှစ်သက်ဆုံးပုံတစ်ပုံအား တစ်ကြိမ်တည်းသာမဲပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ လိုဂိုဆွဲကြသူများအနေနဲ့ မိမိဆွဲတဲ့ပုံကို မိမိမဲပြန်မပေးကြဖို့လဲ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အခြားသူရဲ့ပုံကိုတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ပါက မဲပေးနိုင်ပါတယ်။ MBS ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုတော့ ဖိုရမ်ထဲမှာ အများစုသဘောတူထားတဲ့ We Blog , We Unite ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်။
Logo . 1
MBS ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးသုံးလုံးကို မညီညာတဲ့ frame လေး ၃ ခု နဲ့ လုပ်ထားတာက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘလော့ခ်ဂါတွေက မတူညီတဲ့ အရပ်ဒေသတွေ၊ ခြားနားတဲ့ အသက်အရွယ်တွေ၊ ကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေ ရှိကြပေမယ့် အတူတကွ ကျွန်းကို ကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကို ကျွန်းမှီ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိကြတယ်ဆိုတာကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ M လေးရဲ့ အပြာရောင်လေးက မြန်မာဘလော့ခ်ဂါတွေ အေးချမ်းစွာ ပေါင်းစည်းမှုကို ဆိုလိုပါတယ်။ B ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်လေးက ကျွန်တော်တို့ဟာ အဖွဲအစည်းဟာ ပရဟိတ အတွက် ရည်ရွှယ်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ S ဆိုတဲ့ အနီရောင်လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့က ရဲရင့်ပြီး နိုင်ငံကို အမိနိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အဓိပါယ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။
အထက်ပါလိုဂိုကလေးမှာ အပြာရောင်ဆိုတာ မြန်မာဘလော့ဂါအပေါင်း ထာဝရငြိမ်းချမ်းအေးမြနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် .. ။ အနီရောင်ဆိုတာ .. ရဲရင့်တယ် .. တက်ကြွတယ် .. စုစည်းညီညွတ်တယ်။ အစိမ်းရောင်ကတော့ ဟာမိုနီကျတယ်ပေါ့ဗျာ .. ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပင် တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြေနေကြစေကာမူ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းအပေါ်မှာ သော်လည်းကောင်း၊ ဘလော့ဂါများအပေါ်မှာသော်လည်းကောင်း လိုက်လျောညီထွေ ဆက်ဆံနိုင်လောက်သော စိတ်ဓါတ်ခွန်အား အခြေခံထားနိုင်ကြတယ်လို့ .. သတ်မှတ်ပါတယ်။ အရောင်တိုင်းမှာ အဖြူဘက်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းသမ်းသွားတာကတော့ အဆိုပါ ခံစားချက်များ ပြင်းထန်လွန်းရာကနေထွက်ပေါ်လာမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို လျှော့ပါးစေလိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးများကို အဖြူရောင်သုံးစွဲထားတာကတော့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ .. အတွင်းစိတ်တစ်နေရာက ဖြူစင်လွန်းတဲ့ စေတနာလေးကို ဖော်ကျူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ M နဲ့ S မှာ အစက်ကလေးတစ်စက်ဆီပါဝင်နေတာကတော့ မြန်မာတွေရဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ ပါဝင်လေ့ရှိကြတဲ့ စုန်းပြူးများကို သတိပြုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နောက်ခံအရောင် အနက်ကတော့ လိုဂိုကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန် သက်သက်မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်သဘောအရပြောမယ်ဆိုရင် အဖြူရောင်ဆိုတာ ၀ါယောဓာတ်ပါ .. ။ (အ၀ါရောင်ဆိုရင် ပိုမိုသင့်လျှော်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် သာသနာကိစ္စတွေမှာ အများဆုံးအသုံးပြုတာမို့ တမင်ပဲအဖြူရောင်ကို သုံးခဲ့တာပါ)အပြာရောင်ဆိုတာ အာပေါဓာတ်ပါ .. ။ အနီရောင်ဆိုတာ တေဇောဓာတ်ပါ .. ။ အစိမ်းရောင်ဆိုတာ ပထ၀ီဓါတ်ပါ .. ။ ဓါတ်ကြီးလေးပါးအရလည်း မျှတပါတယ်။
Logo . 2
ဘဲဥပုံလေးလုပ်ပြီးထောင်လိုက်တော့ မောက်စ်လေးနဲ့တူသွားပါတယ်။ MBS နဲ့ Internet နဲ့ ဆက်စပ်မှုကိုဖော်ညွှန်းပါတယ်။ ဘလော့ဂါတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မောက်စ်လေးကနေတဆင့် Link ချိတ်ထားတဲ့သဘောလဲသက်ရောက်ပါတယ်။
အပြာရောင် M ဆိုတဲ့ စကားလုံးအပေါ်မှာ Myanmar Bloggers Society ဆိုတာကို အဖြူနဲ့ရေးထားတာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရှင်းသန့်မြန်မာစိတ်ဓါတ်နဲ့ MBS ဆိုတဲ့ online society လေးတစ်ခု ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပ့ါယ်ပါ။
အနီနဲ့ အဖြူ နှစ်ရောင်စပ်ထားတဲ့ B ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ ဖြူစင်ရဲရင့်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
မြေသားဆန်ဆန်အရောင်နဲ့ S ကတော့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိတဲ့ Society တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။
အရောင်တွေကို အဆင်မပြေရင် အခြားအဓိပ္ပါယ်တွေ ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်လို့ရပါသေးတယ်။
Logo . 3
၁။MBS စာလုံးတွေကိုလိုဂိုပုံ ထွင်းထားတာပါ။ မျက်စိထဲစွဲလွယ် မှတ်မိလွယ် ပြီး Actively & Lively ဖြစ်စေအောင်ကြိုးစားထားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းခြင်းအပြာရောင်နဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်တွေကိုအနီရောင်နဲ့ highlight လုပ်ထားတယ်။
၂။ B ကို အနီ ရောင် လုပ်ထားပြီး သူ့ အထဲမှာ Heart ပုံ စံမောက်(စ)က လေးထွင်းထားတယ်။ စုစည်းခြင်း၊နားလည်ခြင်း၊ မြန်မာ့ နှလုံးသွေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းတယ်။ ကမ္ဘာ လုံးပုံအ၀ိုင်းလေးနောက်မှာ ရေးရေးခံပေးထားတယ်။ Mouseကြိုးလေးနဲ့ Mကိုပတ်ထားတယ်။Mouse တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ မြန်မာတွေကမ္ဘာပတ်၊ နယ်နမိတ်။အချိန်အပိုင်းအခြားမဲ့ ဘလော့(ဂ)နိုင်၊ စုစည်းနိုင်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။
၃။ Society ကိုယ်စားပြု S ကို မိုးကြိုးသွားပုံစံထွင်းထားတယ်။ S အောက်ပိုင်း မိုးကြိုးသွား Tip ကလေးကို ကညစ်ပုံ လုပ်ထားပြီး အနီရောင်နဲ့ ထင်းထင်း ပြထားတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ဓားသွားထက် ကလောင်သွားထက်ဆိုတာကို အင်အားပြင်းတဲ့ မိုးကြိုးလိုထစ်ချုန်းခြင်း နဲ သင်္ကေတပြုထားပြီး ရဲရဲတောက် ကညစ်အဖျားကို အနီ သွင်းပေးထားပါတယ်။
ကညစ် ရဲ့ ရေးချက်ကလေး က Myanmar ကိုယ်စားပြု M စာလုံးအောက်က အ၀ိုင်းလေးကနေ စဆွဲလာလိုက်တာ MBS အောက်ကိုတောက်လျှောက် ဖြတ်သန်းသွားတယ်။ မည်သူမဆို ဘလော(ဂ)ရေးရင်း လက်သွေးရင်းနဲ့ အများအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ နိူင်ငံတိုးတက်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေ၊ နေရာအနှံ့ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ ဘလော့ဂါတွေ MBS အောက်မှာ စုစည်း လုပ်ဆောင်ကြပါစို့ ဆို တဲ့ အနက်ကိုဖော်ထားတဲ့ လိုဂိုကလေးဖြစ်တယ်။
Logo . 4
Logo . 5
အ၀န်းအ၀ိုင်းလေးက ကမ္ဘာကြီးကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီကမ္ဘာမှာ နေရာအသီးသီး၊ အယူအဆ အသီးအသီးနဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေပြန့်ကျဲနေတဲ့သဘောနဲ့ အပေါ်မှာ တစ်ရောင် မီးခိုးရောင်နဲ့ အောက်မှာ တစ်ရောင် အပြာရောင်တို့ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီမတူညီတဲ့ဒေသတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ နောက်ခံအသီးသီးရှိကြတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါများကို MBS ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက စုစည်းချိတ်ဆက်ပေးပုံကို အောက် ဗယ်ဘက်အစွန်းမှာ M ရဲ့ အောက်အစွန်နဲ့ ထိစပ်ထားပြီး အပေါ်ညာဘက်အစွန်ကို S ရဲ့ အပေါ်အစွန်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အောက်ဘက် အပြာရောင်နဲ့ အပေါ်က မီးခိုးရောင်တို့ကို MBS ဆိုတဲ့ စာလုံးမှာ နှစ်ခုရောယှက်သွားတာကတော့ ဟိုဘက်အစွန်းနဲ့ ဒီဘက်အစွန်း ကွာဝေးပေမယ့် MBS မှာ လာပြီး ညီတူညီမျှ ၊ ခွဲခြားလို့မရပဲ ပေါင်းစည်းမိတယ်ဆိုတယ်သဘောပါ။
ကျွန်တော့်အစ်ကိုလိုခင်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ဆွဲပြီး ပို့ထားတာပါ။ ရှင်းလင်းချက်မပါပါဘူး …။
the orange floating lines represent myanmar bloggers (i use orange colour since blogger's logo is orange)
floating represent that they are free to write whatever they want
those lines meet at some points,that means bloggers may have some common interest and ideas
and those lines go different directions as well, that means they also have their own unique ideas.
the background colour is not part of the logo.so it can be any color.but white will be the best to use with.
the logo includes only MBS, myanmarbloggerssociety and orange lines.
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, August 08, 20074comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, August 06, 20072comments:
မိုးခေါင်နေတဲ့လောကမှာ အစ်ကို့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ ဗုံတွေဆက်တီးမယ်ဗျာ ...
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, August 05, 20075comments: